आप्रवासी अधिकार: एक आप्रवासी रूपमा आफ्नो अधिकार थाहा | USAHello
तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिका मा आफ्नो अधिकार थाहा? तपाईं एक आप्रवासी छन् भने, तपाईं नागरिक अधिकार, मानव अधिकार, र कानुनी अधिकार. के तपाईं कागजातनगरिएकोत्रुटि वा थुनामा मा छन् भने पनि यी अधिकार. आफ्नो अधिकार बारे जान्नुहोस्.
शरण खोज्नेहरूको लागि आप्रवासी अधिकार
राष्ट्रिय आप्रवासी न्याय केन्द्र कानुनी सल्लाह प्रदान गर्न र कानुनी सिफारिश प्रदान गर्न उपलब्ध छ. तपाईं आफ्नो टोल मुक्त नम्बरमा राष्ट्रिय आप्रवासी न्याय केन्द्र सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ: (312) 263-0901. यो कागजात तिनीहरूले लेसबियन कारण आफ्नो घर देशहरू फर्कन डराउँछन् गर्ने मान्छे को लागि छ, समलिङ्गी, बिसेकषिल वा transgender (LGBT) र / वा कारण आफ्नो एचआईभी स्थितिको. तपाईं आफ्नो घर देश deported भने तपाईं हानि वा यातना गरिनेछ डर यदि तपाईं आचरण विरुद्ध एक रक्षा हुन सक्छ.
तपाईं पनि कागजात पढ्न सक्नुहुन्छ स्पेनी, फ्रान्सेली, वा अरबी.
“हामी अधिकार” - ACLU भिडियो
तपाईं स्पेनिश सबै भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, उर्दू, अरबी, Haitian क्रियोल, अन रूसी र चीनी ACLU साइट.
संयुक्त राज्य अमेरिका बस्ने - आफ्नो आप्रवासी अधिकार थाहा
को आप्रवासी कानूनी स्रोत केन्द्र का लाल कार्ड मानिसहरू आफू संवैधानिक उल्लंघन विरुद्ध अधिकार ठोकुवा र रक्षा गर्न मद्दत गर्न बनाइयो. तिनीहरूले मानिसहरूलाई आफ्नो अधिकार एक आप्रवासी थाहा मदत (यहाँ कि कानुनी रूपमा वा) सामना यदि वा एक नागरिक खेती हुन सक्छ.
ICivics एक वेबसाइट जहाँ बच्चाहरु र वयस्क भिडियो खेल अमेरिकामा अधिकार र व्यवस्था सिक्न प्ले गर्न सक्नुहुन्छ छ. खेल केही पनि स्पेनी प्ले गर्न सकिँदैन.
बरफ आप्रवासी अधिकार
यदि सफ्टवेयर अपडेट
शरण खोज्नेहरूको अद्यावधिक
आप्रवासी थुनामा: अमेरिकी-मेक्सिको बोर्डर मा मान्छे को लागि मद्दत
यो पृष्ठमा जानकारी आउँछ ACLU, को राष्ट्रिय आप्रवासी न्याय केन्द्र (NIJC), को आप्रवासी कानूनी स्रोत केन्द्र (ILRC) र अन्य विश्वसनीय स्रोतबाट. यो निर्देशन लागि निमित्त र सकेसम्म अक्सर अद्यावधिक. USAHello कानुनी सल्लाह दिन छैन, न त हाम्रो सामाग्री इरादा कुनै पनि कानुनी सल्लाह रूपमा लिइने गरिन्छ. तपाईँलाई नि: शुल्क वा कम लागत वकील वा कानुनी सहायता खोजिरहेको भने, हामी तपाईंलाई मदत गर्न सक्छ निःशुल्क र कम लागत कानुनी सेवा पाउन.